२१ बर्षको उमेरमा नै सबैभन्दा धेरै मतका साथ कांग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुने युवती को हुन् ?
साेलुखुम्बु – सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका ३ की २१ वर्षीया पूजा फुयाँल नेपाली कांग्रेसकाे क्षेत्रीय प्रतिनिधि पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । वडा अधिवेशसनमा खसेको दुई सय ६३ मतमध्ये पूजाले सबैभन्दा धेरै अर्थात् दुई सय दुई मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको नेपाली कांग्रेस सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।
नौ कक्षामै पढ्दा हिमाल दर्शन मावि नेचाको नेविसङ्घ इकाइ सभापति बनेकी पूजा उच्च शिक्षा अध्ययनको क्रममा २०७३ सालमा सानोठिमि क्याम्पस भक्तपुरको स्ववियु सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियाे । पूजा अहिले नेविसङ्घ सोलुको कोषाध्यक्ष र जीपी कोइराला फाउन्डेशनकाे जिल्ला सहसचिव हुनुहुन्छ ।
लगातार पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेकी पूजा यो पटक धेरै मत ल्याएर जित्दा निकै दङ्ग हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले सहमतिमा मलाई एउटा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा पठाउनुस् भनेर सबै नेता तथा पार्टीका अगुवालाई भने तर उहाँहरूले मलाई अन्य पदमा राख्ने आश्वासन दिएर नपठाउने कुरा गर्नुभयो तर चुनावमा गएपछि मलाई ९० प्रतिशत क्रियाशील सदस्यले माया गरेर जिताउनु भयो ।’
क्षेत्रीय प्रतिनिधि जितेसँगै राजनीतिमा युवाहरूको भविष्यप्रति आशा जागेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसमा ५० कटेकालाई युवा नेता मान्नुपर्ने विवशतालाई अब हाम्रो पुस्ताले तोड्नुपर्छ ।’
पूजाका हजुरबुबा लीलाराज फुयाँल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गाविस अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयाे । ५२ वटा वडा रहेको सोलुखुम्बुमा दुई वटा वडामा मात्र चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन भएको हो । चुनाव भएको नेचासल्यान गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडा हो ।
यो पनि – एमालेले सोध्यो सभामुखलाई प्रश्न – दल विभाजनमा किन भूमिका निर्वाह गरेको ? संसद बैठकमा एमालेका सांसदहरुले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसदहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले टुक्र्याउन सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै जवाफ समेत माग गरेका हुन् । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखले एमालेले कारवाही गरेका सांसदहरुको सम्बन्धमा सूचना नदिएको भन्दै अनुत्तरित प्रश्न सृजना भएको बताए ।
उनले भने, ‘सभामुखको आसनबाट जवाफ खोजिरहेका छौँ । यथोचित जवाफ नपाउन्जेल संसद अगाडि बढ्न दिँदैनौं ।’ उनले सभामुखसँग भेट गर्दा पनि यस विषयलाई वास्ता नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
‘यसअघिको नजिरलाई हेर्दा पनि माननीय सरिता गिरीलाई सूचना जारी गरेर निष्कासन गर्नुभएको थियो । २०७७ साल चैत २४ गते दर्ता भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका चार जना सांसदहरुको हकमा निष्कासनसँग सम्बन्धित पत्र २४ घण्टा नबित्दै संसद बैठकमा पढेर सुनाउनुभएको थियो । त्यो नियम नेकपा एमालेमा लागु हुन्छ कि हुँदैन ?’ एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले सोधे ।
उनले सभामुख सापकोटाप्रति लक्षित गर्दै सबै दलहरुलाई समान व्यवहार नगरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । एमालेले कारवाही गरेका सांसदलाई नहटाइएकोमा सभामुखलाई दल विभाजनको मतियार बनेको आरोप लगाए ।
सभामुख सापकोटाले जवाफ दिँदै कानून बमोजिम निर्णय लिएको बताएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली खण्ड नियम २१ को खण्ड ‘क’ र ‘ग’ आकर्षण गराएका थिए । भट्टराईले बोलेपछि एमाले सांसदहरुले नारावाजी गर्दै बैठक अवरोध गरेका थिए ।
ओलीको टिम बाटै ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ आउट !
वामदेव गौतमलाई हराएका सञ्जयले ४ वर्षपछि खुलाए चुनाव जित्नुको रहस्य !
माधव नेपालले दिए देउवाको कन्सिरी तात्ने अभिव्यक्ति, देशभरका काग्रेस कार्यकर्ता आक्रोसित
बलेसँग ब्रेकअप भएको समाचारले तहल्का मच्चाएपछि प्रिज्माले बल्ल मुख खोलिन् !
उपाध्यक्षले मु’क्का प्र’हार गरेपछि अध्यक्षको दाँत भाँ’चियो !